Cadde Muuse oo Wasiiro Cusub Magacaabay Yaase Ka mid ah | maakhir.com
December 29, 2007 in Somalia
Garoowe:- Cade Muuse Xirse Madaxwaynaha Maamulka Puntland ayaa maanta magcaabay Wasiiro cusub kuwaasi oo ku soo kordhiyay Golaha wasiirada Puntland, wasiiradaasi uu Cade Muuse magcaabay ayaa waxa ka mid ah kuwa uu dhawaan bedelaada ku samayn jiray qaarkood,iyo waliba kuwa kale oo markaasi aan lug wayn kula hayn arimaha siyaasada.
Cade Muuse ayaa umagacaabay Cali Cabdi Awaare wasiiru dawlaha madaxtooyada, xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga, Cade Muuse ayaa magcaabistaa Cali Cabdi Awaare waxa uu ku til maamay markuu xeeriyay codsiyo fara badan oo uga yimi Ismada Maamulka puntland kuwaasi oo sheegay in Cali Awaare shaqada lagu soo celiyo.
Cade Muuse ayaa sidoo kale umagaacaabay Maymuun Cabdi Ducaale wasiir kuxigeenka 2-aad ee caafimaadka Puntland, taasina waxa uu Cade Muuse sabab uga dhigay in loo baahan yahay inay haweenku door wayn ku yeeshaan Siyaasada Maamulka Puntland.
Wareeegto kale oo ka soo baxday Xaafiiska Madaxweynaha Puntland ayaa loo magacaabay wasiirkii hore ee Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah Cabdi Salaad Cabdi isaga oo la sheegay inuu La Taliye u noqndoono wasiirka Cusub ee wasaaradaasi ee lagu wareejiyay.
Tan ayaa ku soo beeg maysaa iyada oo mudo bil ku dhawaad ah laga joogo xiligii uu Cade Muuse isku shaan dheeyay Golihiisa wasiirada, ila markaasna uu shaqadii ka joojiyay Cali Cabdi Awaare oo ahaa Wasiirka Dawlaga Hoose iyo horomarinta Gobolada.
Dadka ka faalooda arimaha siyaasada Puntland ayaa arinkaas uu Cade Muuse ku dhaqaaqay waxay ku sheegeen inay tahay xeelad siyaasadeed taasi oo Cali Awaare looga shaki qabo inuu ku guulaysan doono Doorashada madaxtinimada Puntland, isla markaana uu Cade Muuse xilikaas uu u magcaabay uu iskaga jeedinayo.
« Maydkii Banazir Bhutto oo loo qaaday Gobolka ay ka soo jeedo
Afduubayaashii Shaqaalaha M.S.F oo dalbaday Aduun Lacag ah oo Madax furasho ah »